Maxaa ka soo baxay kulankii qurbajoogta soomaliyeed iyo ambassador Walad cabdalla?
Qore, Abdirashid M.Yusuf, food science engineer
Isniin, 8 jun
Maalitii isniinta oo taariikhda ku beegnayd 08/06/2009 ayaa kulan ku dhex maray qaar ka mid qurbajoogta soomaliyeed ee ku nool Waddamada yurubta galbeed iyo wafti uu hogaaminayay wakiilka UNka u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Walad Cabdalla. Kullankaa waxaa lagu qabtay magaalada London ee carriga Ingariiska, waxaana lagu wadda kulmay hoolasha shirarka ee wasaarada arimaha dibada ee wadanka ingariiska. Kulankaa waxaa ka soo qaybgalay oo kale guddi heersare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee ingariiska ee uu hogaaminayay wasiirka arimaha Afrika u qaabilsan ee waddanka ingariiska Lord Malloch-Brown.
Ujeedada kulanka waxa uu ahaa fikraddo isdhaafsi iyo dood wadaag u dhexeeyo labda qaybood. Kulanka waxa uu ku bilowday Ambassador Wallad Cabdalla oo warbaxin kooban ka siiyay arimaha Soomaaliya iyo sida ay xaaldu tahay , Isagoo soo qaaday arimo kala duwan sida nabadgalayada, siyaasada, horamarinta iyo dhaqaalaha , buracad badeedka iyo in la taageero Dowlada ku meel gaarka ah iyo dowr ay qurbajoogta oga qayb qaadanayaan hormarinta mashruucyada ku wajihan Waddanka. Waxaa kaloo qubad kooban ka jeediyay meesha Wasiirka Inagriiska u qaabilsan arimaha Afrika Lord Malloch-Brown oo isagana taageeray holaha ku wajihan Soomaaliya ee uu wadda Ambassador Walad Cabdalla.
Ka dibna Ambassadorka iyo waftigiisii waxay ka jawaabeen su `allo ay waydiiyeen qaar ka mid qurbajoogta soomaliyeed, waxay kaloo qurbajoogta u soo jeediyeen tallooyin oo ku saabsan sida wax laga yeeli lahaa xaalada qalafsan ee Soomaaliya.
Kulankaa waxuu ku dhamaaday jawi wanaagsan iyo is afgarad ,waxaana la isku soo qaaday in la sii ambaqaado qodabadii kulanka looga hadalay, iyo in la xoojiyo waddashaqaynta qurbajoogta iyo xafiiska Ambassador Walad Cabdalla si loo gaaro xadafka lawada hiigsanayo.
La Xiriir: anas69@hotmail.com